Fitsanganana amin'ny maty - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny hoavy > Fitsanganana amin'ny maty
Fanantenan’ny Kristianina rehetra ny fitsanganan’ny mino ho amin’ny fiainana tsy mety maty amin’ny fisehoan’i Kristy. Noho izany, dia tsy tokony hahagaga raha rehefa ren’ny apostoly Paoly fa nisy mpikambana sasany tao amin’ny Fiangonana Korintiana nandà ny fitsanganana amin’ny maty, dia ny tsy fahatakarany ny hevitr’izy ireo. 1. Taratasy ho an’ny Korintiana, toko faha-15, nolavina mafy. Voalohany, namerina ny hafatry ny filazantsara izay nambaran’izy ireo koa i Paoly hoe: Nitsangana i Kristy. Tsaroan’i Paoly ny fomba nametrahana ny fatin’i Jesoa nohomboana tamin’ny fasana sy nananganana azy manokana ho amin’ny voninahitra, telo andro taty aoriana (andininy 3–4). Nohazavainy avy eo fa i Kristy, mpialoha lalana antsika, dia nitsangana tamin’ny maty - mba hitarika antsika amin’ny lalana mankany amin’ny fitsanganana amin’ny maty amin’ny fisehoany (and. 4,20-23).
Mba hanamafisana fa marina tokoa ny nitsanganan’i Kristy tamin’ny maty, dia niantehitra tamin’ny vavolombelona 500 mahery izay nisehoan’i Jesosy taorian’ny nitsanganany tamin’ny maty i Paoly. Mbola velona ny ankamaroan’ny Vavolombelona tamin’izy nanoratra ny taratasiny (andininy 5–7). Kristy koa dia niseho tamin’ny apostoly sy Paoly manokana (and 8). Ny hoe be dia be ny olona nahita an’i Jesosy tao amin’ny nofo taorian’ny fandevenana dia midika fa natsangana tamin’ny nofo izy, na dia i Paoly aza ao amin’ny Gen.5. Tsy naneho hevitra mazava momba izany ny Toko.
Na izany aza, nampahafantariny ny Korintianina fa tsy misy dikany izany ary, noho ny finoana kristiana, dia misy valiny tsy misy dikany raha misy fisalasalana ny fitsanganan'ny mpino amin'ny ho avy - satria nino izy ireo fa nitsangana tamin'ny fasana i Kristy. Raha ny antony tsy mino ny fitsanganan'ny maty dia midika fa mandà fa i Kristy dia nitsangana tamin'ny maty. Raha tsy natsangana Kristy dia tsy hanana fanantenana ny mpino. Nanoratra ho an'ny Korintiana anefa i Paoly fa efa nitsangana i Kristy, ary nanome toky ny mpino fa hitsangana amin'ny maty koa izy ireo.
Mifantoka amin’i Kristy ny hafatr’i Paoly momba ny fitsanganan’ny mino. Nohazavainy fa ny herin’Andriamanitra mamonjy amin’ny alalan’i Kristy eo amin’ny fiainany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany ho amin’ny fiainana dia mamela ny fitsanganan’ny mpino amin’ny maty – ary noho izany ny fandresen’Andriamanitra ny fahafatesana farany (and 22-26, 54-57).
Efa imbetsaka i Paoly no nitory an’io vaovao tsara io — fa i Kristy dia nitsangana tamin’ny maty ary ny mpino koa dia hitsangana amin’ny maty rehefa hiseho. Nanoratra toy izao i Paoly tao amin’ny taratasiny teo aloha: “Fa raha inoantsika fa efa maty sy efa nitsangana i Jesosy, dia hitondra izay efa nodi-mandry koa Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy.” (1. Thessalonians 4,14). Izany fampanantenana izany, hoy i Paoly, dia nifanaraka tamin’ny “tenin’ny Tompo” (and. 15).
Niantehitra tamin'ny fanantenana sy fampanantenan'i Jesosy ao amin'ny Soratra Masina ny Fiangonana ary nampianatra hatramin'ny voalohany ny finoana ny fitsanganana amin'ny maty. Ao amin'ny Nicene Creed tamin'ny taona 381 AD dia hoy izy: "miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainana ho avy izahay." Ary ny fitsipiky ny Apostoly nanomboka tamin'ny taona 750 AD dia nanamafy: "mino aho ... ny ... fitsanganan'ny maty sy fiainana mandrakizay."
Ny fanontaniana momba ny vatana vaovao amin'ny fitsanganana amin'ny maty
Im 1. Ao amin’ny Korintiana 15, i Paoly dia namaly manokana ny tsy finoan’ny Korintiana sy ny tsy fahatakarany ny fitsanganana amin’ny maty: “Fa mety hisy hanontany hoe: Ahoana no fanangana ny maty, ary vatana manao ahoana no hihaviany? ( Andininy faha-35 ). Ny fanontaniana eto dia ny amin’ny fomba hahatanterahan’ny fitsanganana amin’ny maty — ary vatana inona, raha misy, no horaisin’ireo hatsangana amin’ny maty ho amin’ny fiainam-baovao. Diso hevitra ny Korintiana fa i Paoly dia niresaka momba ilay vatana mety maty sy mpanota izay nananany teto amin’ity fiainana ity.
Fa maninona izy ireo no mila vatana amin'ny fitsanganana amin'ny maty, nanontany ny tenany izy ireo, indrindra fa vatana iray tsy lozivazy toa izao? Raha tsy nahatratra ny tanjon'ny famonjena ara-panahy ve izy ireo ary tsy tokony hanafaka ny tenany amin'ny vatan'izy ireo? Hoy ilay teolojiana Gordon D. Fee: "Resy lahatra ireo Korinto fa efa nanomboka ny fisianny Fanahy ara-panahy nampanantenaina, dia ny" lanitra ", amin'ny alàlan'ny fanomezana ny Fanahy Masina ary indrindra amin'ny alàlan'ny fahitana ireo fiteny. Ny vatana ihany izay tsy maintsy nesorina rehefa ny fahafatesana no manasaraka azy amin'ny lafiny ara-panahy farany. »
Tsy takatry ny Korintianina fa ny vatana fitsanganana amin’ny maty dia ambony sy hafa noho ny vatana ankehitriny. Mila an’io vatana “ara-panahy” vaovao io izy ireo mba hiaina miaraka amin’Andriamanitra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra. Nanome ohatra avy amin’ny fambolena i Paoly mba hampisehoana ny voninahitry ny tenan’ny lanitra lehibe kokoa raha oharina amin’ny vatantsika ara-nofo eto an-tany: Niresaka ny amin’ny maha samy hafa ny voa sy ny zavamaniry maniry avy aminy izy. Ny voa dia mety "maty" na ho faty, fa ny vatana - ny zavamaniry izay mipoitra avy aminy - dia manana voninahitra lehibe kokoa. “Ary izay afafinao dia tsy ny tena izay ho tonga, fa ny voa ihany, na vary, na zavatra hafa”, hoy ny nosoratan’i Paoly (and 37). Tsy afaka maminavina isika hoe manao ahoana ny endriky ny vatantsika hitsangana amin’ny maty raha oharina amin’ny endrik’ilay vatantsika ankehitriny, nefa fantatsika fa ny vatana vaovao dia ho be voninahitra be kokoa - tahaka ny hazo oaka raha oharina amin’ny voany, dia ny acorn.
Afaka matoky isika fa ny vatana fitsanganana amin’ny maty ao anatin’ny voninahiny sy ny tsy manam-petra dia hahatonga ny fiainantsika mandrakizay ho kanto kokoa noho ny fiainantsika ara-batana ankehitriny. Hoy i Paoly: “Toy izany koa ny fitsanganan’ny maty. Hafafy mety lo ary hatsangana tsy ho lo. afafy amin’ny fanetren-tena izy ary atsangana amin’ny voninahitra. Hafafy amin’ny fahantrana izy ary hatsangana amin’ny hery » (and 42-43).
Ny vatan’ny fitsanganana amin’ny maty dia tsy ho kopia na famokarana marina ny vatantsika, hoy i Paoly. Ankoatra izany, ny vatana izay raisintsika amin’ny fitsanganana amin’ny maty dia tsy hisy atôma mitovy amin’ny vatana ara-batana eo amin’ny fiainantsika eto an-tany, izay lo na simba rehefa maty. (Ankoatra izany - vatana inona no horaisintsika: ny vatantsika amin'ny faha-2, 20, 45, na 75 taona?) Ny vatana any an-danitra dia hisongadina amin'ny toetrany sy ny voninahiny amin'ny vatana eto an-tany - toy ny lolo mahagaga izay manao ny azy. cocoon , fonenan'ny fanday iva taloha.
Vatana voajanahary sy vatana ara-panahy
Tsy misy ny teboka manombatombana momba izay ho toetsika atsangana amin'ny maty sy ny fiainana tsy mety maty. Saingy afaka manao fanambarana ankapobeny isika mikasika ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny toetran'ny vatana roa.
Ny vatantsika amin'izao fotoana izao dia vatana ara-nofo ary noho izany dia iharan'ny fahalovana, fahafatesana ary ota. Ny vatana fitsanganana amin'ny maty dia midika fiainana amin'ny lafiny hafa - fiainana tsy mety maty sy tsy mety maty. Hoy i Paoly: “Afafy vatana araka ny nofo izy, ary atsangana ho tena ara-panahy” — tsy “vatana ara-panahy”, fa vatana ara-panahy, mba hahatanteraka ny fahamarinana amin’ny fiainana ho avy. Ny vatana vaovaon’ny mpino amin’ny fitsanganana amin’ny maty dia ho “ara-panahy” – tsy zavatra tsy ara-nofo, fa ara-panahy, amin’ny heviny hoe noforonin’Andriamanitra mba hitovy amin’ny tenan’i Kristy izay be voninahitra, novana sy “nampifanarahana amin’ny fiainan’ny Fanahy Masina mandrakizay. " ». Ny vatana vaovao dia ho tena misy; ny mpino dia tsy ho fanahy na matoatoa. Nampifanoherin’i Paoly i Adama sy Jesosy mba hanasongadinana ny maha samy hafa ny vatantsika ankehitriny sy ny vatantsika nitsangana tamin’ny maty. « Tahaka ny etỳ an-tany, dia tahaka izany koa ny etỳ an-tany; ary tahaka ny any an-danitra dia tahaka izany koa ny any an-danitra” (and 48). Ireo izay ao amin’i Kristy rehefa miseho izy dia hanana vatana sy fiainana hitsangana amin’ny maty araka ny endrik’i Jesosy sy ny maha-izy azy, fa tsy ny endrik’i Adama sy ny maha-izy azy. “Ary tahaka ny nitondrantsika ny endrik’ny etỳ an-tany no hitondrantsika ny endrik’ilay any an-danitra koa” (and 49). Ny Tompo, hoy i Paoly, dia “hanova ny tenantsika foana, mba ho tonga tahaka ny vatany be voninahitra” (Filipiana). 3,21).
Fandresena noho ny fahafatesana
Midika izany fa ny vatantsika fitsanganana amin’ny maty dia tsy ho nofo aman-dra mora simba tahaka ny vatana izay fantatsika ankehitriny – tsy miankina amin’ny sakafo sy ny oksizenina ary ny rano intsony vao afaka miaina. Nanizingizina toy izao i Paoly: “Izao no lazaiko, ry rahalahy, fa ny nofo aman-dra tsy mahazo mandova ny fanjakan’Andriamanitra; ary ny mety lo tsy handova ny tsy fahalovana »(1. Korintiana 15,50).
Amin'ny fisehoan'ny Tompo, ny vatantsika mety maty dia hovana ho vatana tsy mety maty - ho amin'ny fiainana mandrakizay ary tsy ho faty sy ho lo intsony. Ary izao no tenin’i Paoly tamin’ny Korintiana: «Indro, zava-miafina no lazaiko aminareo: tsy hodi-mandry avokoa isika rehetra, fa hovana avokoa; ary tampoka teo, tao anatin’ny indray mipi-maso, tamin’ny fotoanan’ny trompetra farany [fanoharana ny amin’ny fiavian’i Kristy]. Fa hotsofina ny trompetra, ary ny maty hitsangana tsy ho lo intsony, ary isika hovana » (and 51-52).
Loharanom-pifaliana sy sakafo ho an’ny fanantenantsika kristiana ny fitsanganana amin’ny maty ho amin’ny fiainana tsy mety maty. Hoy i Paoly: “Fa raha io mety lo io no mitaona ny tsi-fahalòvana, ary ny mety maty no mitaona ny tsi-fahafatesana, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe: “Resin’ny fandresena ny fahafatesana” (and. 54).